गोरेका लागि सेटिङ मिलाउँथे राम तिवारी ! कसरी बने सामान्य व्यापारीबाट करोडपति ?
२०७५ जेठ २५ शुक्रबार ११:३७:००
काठमाडौं । सनम शाक्य हत्या र ३८ क्वीन्टल सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न गठित विशेष अनुसन्धान समितिले चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’का विश्वासपात्र भनिएका राम तिवारीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । सनमको हत्यालगत्तै पनि पनि तिवारीलाई अनुसन्धान समितिले नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर त्यतिबेला उनको गोरेसँगको संग्लनता पुष्टि हुन नसकेपछि आवश्यक परेको बेला बोलाउने भनेर कागज गरेर छाडियो । त्यसपछि उनी उपचारका लागि भन्दै दक्षिण कोरिया गए । अनुसन्धान समितिले तिवारीमाथि निगरानी राखेकै थियो ।
जेठ २२ मा कोरियाबाट फर्कंदै गर्दा तिवारी त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल परिसरबाटै पक्राउ परे । गोरेको मोबाइलमा राम तिवारी र गोरेको टेलिफोन संवाद भेटिएपछि तिवारी पक्राउ परेका हुन् । जुन संवादमा तिवारीसँग गोरेले लेनदेनलगायत सुनको कुरा गरेका छन् । यतिमात्रै होइन, गोरेले अपराध महाशाखाका तत्कालीन डिएसपी प्रजित केसीसँगको कुराकानीमा पनि सनमको शव व्यवस्थापन गरेबापत दिने भनेको २ करोडमध्ये ५० लाख तिवारीले दिने उल्लेख गरेका थिए । त्यही अडियो प्रमाणबाट तिवारी पक्राउ परेका हुन् ।
को हुन् राम तिवारी ?
झण्डै ४२ वर्षका तिवारी एक कक्षा पनि औपचारिक अध्ययन नगरेका व्यक्ति हुन् । तिवारी काभ्रेको नमोबुद्ध गाउँपालिकास्थित मेथिनकोटका स्थायी बासिन्दा हुन् । हाल उनको काठमाडौं गौरीघाटस्थित गोरेको घर नजिकै भव्य बंगला छ । सुरुमा उनी सामान्य कपडा व्यापारी थिए ।
त्यसपछि उनले कपडाको व्यापार छाडेर ‘गुण्डा नाइके’ गणेश लामासँग पाटर्नरसीपमा सिन्धुपाल्चोकमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरे । तिवारी २०५० को दशकमा काठमाडौं छिरे । त्यसपछि गोरेको सम्र्पकमा जोडिएका तिवारीले घरजग्गा कारोबार गर्न थाले । त्यसमा उनले गोरेको पैसा लगानी गर्ने, मिटरव्याजमा पैसा लगाउन थाले । अनुसन्धान समितिका एक सदस्य भन्छन्, “तिवारीले पछिल्लो समय गोरेको सबै कारोबार हेर्थे, करोडौंको डिल तिवारीले नै गर्ने गरेका थिए । सनमले त हिसाब मात्रै राख्थे । गोरेले पनि तिवारीलाई सबैभन्दा बढी विश्वास गरेको देखिन्छ ।”
समितिका सदस्यका अनुसार गोरेका लागि जमिन खरिद गर्ने, विभिन्न नातागोताका नाममा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने जिम्मा तिवारीले नै लिएका थिए । अहिले तिवारीसँग करोडौंको सम्पति भएको समितिको दाबी छ । एक सदस्य भन्छन्, “अहिले ऊ समान्य उपचार गर्न पनि कोरिया पुग्ने हैसियत राख्छ । काठमाडौँको कालोपुलमा रेनो गाडीको सर्भिस सेन्टर पनि छ । तर त्यसलाई उनले भाडामा दिएका छन् । दुईवटा विवाह गरेका तिवारीका ४ सन्तान छन् । दुई श्रीमतीमध्ये एक कोटेश्वर र अर्की गौरीघाटमा बस्दै आएका छन् ।” अनुसन्धान समितिले तिवारीको नाममा करोडौंको जमीन, गाडीलगायत सम्पति भेटिएको दाबी गरेको छ ।
कर्मचारीदेखि न्यायाधीशसम्म ‘सेटिङ’ मिलाउँथे तिवारी
तिवारीलाई काठमाडौंबाटै सार्वजनिक अपराध ऐनमा मुद्दा चलाउन अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ । तिवारीले बयानमा क्रममा गोरेसँग आफ्नो चिनजान भएको केही वर्षमात्रै भएको बताएका छन् । तिवारीले गोरेलाई समस्या पर्दा प्रहरीका उच्च अधिकारी, न्यायाधीश र केही उच्च कर्मचारी अधिकारीसम्मको सेटिङ मिलाउने काम गर्थे ।
तिवारीको अनुसन्धानपछि सुन तस्करीको थप रहस्य बाहिर आउने समितिको विश्वास छ ।